Maxoow yahay Kulanka Musharaxiinta Madaxweyne 2021 kuwooda Mucaaradka ugu furmayo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maxoow yahay Kulanka Musharaxiinta Madaxweyne 2021 kuwooda Mucaaradka ugu furmayo
Waayahan Nairobi waxay aheyd Magaalo xarun ay ka soo ololeeyaan Mucaaradka kooxda markaa Dowladnimada heysa. tan iyo 2016 oo ay kooxo Mucaarid ah ka bilaabeen olole Doorasho. Kuwaa oo ka mid ahaa Madaxweyne Farmaajo oo 2015-2016 deganaa Nairobi.
Balse Haatan sidaa oo kale waxay Martigelisay Siyaasiyiin badan oo xil doon ah, kuwaa oo doonaya inay mar uun Madaxweyne Farmaajo meesha ka wareejiyaan. Sidii Mucaaradkii isbedel doonka ahaa ee qeybta ka ahaa Madaxweyne Farmaajo. Waxaa ka socda Shir xasaasi ah xiligan aan qormadan qorayo. Wada hadalkaa ayey warbixintu inagu soo gaareysaa inay Siyaasiyiin badan oo ay ka mid yihiin Madaxweynahii hore Xasan Sheekh. Madaxweynahii hore ee K/Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan. Madaxweynahii hore ee GALMUDUG Abdikarin Hussein Guled iyo xubno kale ay fadhiyaan kulanka. Halka ay qadka telefoonka ay kaga Qeyb qaadanayaam Madaxweynahii hore Shariif Sheekh Axmed oo haatan Kambala Ugandha ku Sugan iyo R/wasaarahii hore Xasan Cali Kheyre oo Turkiga ku sugan iyo xubno kale oo Muqdisho ku sugan.
Kulanka ayey warar ku dhowdhowi tibaaxayaan hanaanka Doorasho ee dalka iyo Gudiga Doorasho ee muranka badani ka taagan yahay. Sidoo kale waxaa ajandaha ka mid ah sidii ay u sameyn lahaayeen qorshe adag oo lagu wajaho Doorashada soo Socota. Awood dhinaca baarlamanka ah oo xoogan oo ay ku wajahaan MW Farmaajo.
Kulanka ayey xogaha laga helayo sheegayaan in Maalinta Beri ah ay Muqdisho soo gaari doonaan MW Xasan Sheekh. Shariif Xasan iyo xubno kale. Sidoo kale waxaa la filayaa RW hore Kheyre in uu isaguna beri soo gaaro Muqdisho. Dib ugu soo noqoshada Madaxda Mucaarad Magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadeysa xili ay jirto cakirnaan Siyaasadeed. Taas oo salka ku heysa hanaanka Doorasho ee dalka garsooreyaasha loo magacaabay oo ah Gudiga Doorashada dadban.
Previous articleMadaxweyne farmaajo oo wali ku taamayo muda Kodhin
Next articleRa iisal wasaaraha Etoobiya oo 3 Cisha u qabyay in ay Isku soo dhiibaan Ciidanka Tigareeda